हरेक क्षण प्रयास गर्दै कर्मशील बन, सफलताले तिम्रो साथ हुनेछ ! – Sagarmatha Online News Portal
हरेक क्षण प्रयास गर्दै कर्मशील बन, सफलताले तिम्रो साथ हुनेछ !
काठमाडौं । विश्व चर्चित अधिकांश मानिसहरु गरिब परिवारमा जन्मिएका थिए । उनीहरुको चित्कारिलो बालापन, संघर्षशील युवा अवस्था र निरन्तर कामप्रतिको लगावका कारण विश्व चर्चित भएर प्रशस्त नाम र दाम दुवै कमाएका उदाहरणहरु छन् ।
चाहे त्यो खलासीको काम गर्ने रजनीकान्त होस, वा कवाडीको काम गर्ने स्टिभ जब्स । उनीहरुको कर्मशील निरन्तरताका कारण विश्व चर्चित बनेका छन् । खलासीको काम गर्दागर्दै सुपरस्टार बनेका थिए रजनीकान्त । त्यसैगरी कवाडीको काम गर्दागर्दै एप्पलका मालिक भएका थिए स्टिभ जब्स ।
नेपाली ईतिहासमा पनि बालापनमा चोर्दै हिड्ने विवेकानन्द धार्मिक गुरु हुँदै मोटिभेस्नल स्पीकर भएका छन् । अहिले उनको मोटिभेस्नल स्पीच मनोक्रान्ति नामक युट्युब च्यानल मार्फत सार्वजनिक गरिदै आएको छ । त्यसैगरी कक्षा ७ मा फेल भएका रामकृष्ण ढकाल चर्चित गायक बने, भने घरबाट २ सय रुपीयाँ बोकी निस्केका पुस्कर शाहले विश्व घुमे ।
धेरै पटक असफल भएका व्यक्तिहरु यसरी बने विश्व चर्चित हेर्नुहोस ।
– खलासीको काम गर्ने रजनीकान्त बलिउडको सुपरस्टार बने ।
– ड्राइभरको काम गर्ने एल्विस प्रिस्ले विख्यात गायक बने ।
– कवाडीको काम गर्ने स्टिभ जब्स एप्पलका मालिक बने ।
– वेटरको काम गर्ने लियोनेल मेस्सी धनी फुटवल प्लेयर बने ।
– सानैमा चोरी गर्दै हिड्ने विकाशानन्द धार्मिक गुरूहुँदै मोटिभेस्नल स्पीकर बने ।
– ७ कक्षा फेल रामकृष्ण ढकाल चर्चीत गायक बने ।
– २ सय रूपिया बोकि निस्केका पुष्कर शाहले विश्व घुमे ।
– ७ पटक एसएलसी फेल रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वकवी बने ।
– मुम्बई हेर्छु भनी ट्याक्सी चढेर आएका शाहरूख खान किङ खान बने ।
– एसएलसी पास रेखा थापा चर्चित नायिका बनिन् ।
– ३ पटक एसएलसी फेल हिरवंश आचार्य नामी कलाकार बने ।
– स्कूलको मुख नदेखेका जोनडी रकेफेलर विश्वकै धनी बने ।
– थर्ड डिभिजनमा एसएलसी पास गरेका महात्मा गान्धी विश्व नेता बने ।
– ३ डलर बोकेर विजनेसमा छिरेका एड्रयु कारनेगी धनाढ्य बने ।
– दाउरेको छोरा अब्राहम लिंकन अमेरिकाको राष्ट्रपती बने ।
– मन्दबुद्धीको भनिएका अल्बर्ट आइन्स्टाइन संसारकै जिनियस वैज्ञानिक बने । त्यसैले जीवन भोगाईको क्रममा हामीले प्रयास गर्न कहिल्यै छोड्नु हुँदैन । कुनै दिन सफलता अवश्य प्राप्त हुनेछ ।